Nei katsi yangu ichidya neshungu? | Noti Katsi
Maria Jose Roldan | | Zvokudya, Curiosities
Nguva yekudya inofanira kunge iri nguva yakanyarara yemunhu wese, kunyangwe vaine makumbo maviri kana mana. Asi dzimwe nguva tinosangana nekatsi inoita kunge iri kukurumidza kupedza chikafu chayo wotanga kuita zvimwe zvinhu. Chii chingaitwe mune idzi kesi?
Kana katsi yangu ichidya neshungu, ndinoziva kuti nguva yasvika yekufunganya. Hazvina kujairika kuti ndidye zvakanyanya uye nekukurumidza. Kukubatsira iwe, zvakakosha kutanga waziva kuti sei uchizviita.
1 Nei katsi yangu ichidya neshungu?
1.1 Yaiva katsi yenherera
1.2 Ari kutambura kushungurudzwa
1.3 Anotya nehunhu
1.4 Enda nenzara
1.5 Chikafu chemhando yepamusoro
1.6 Kushungurudzika uye matambudziko emanzwiro
1.7 Zvimwe zvinokonzeresa
2 Chii chekuita kukubatsira iwe?
Tevere isu tichaenda kuona zvikonzero kuti iwe unzwisise zvimwe zvikonzero nei katsi yako inogona kunge ichive neiyi shungu nechikafu uye ndosaka ichidya zvine shungu kudaro.
Yaiva katsi yenherera
Katsi isina kupihwa chikafu naamai, zvisinei nechikonzero, kazhinji inokura ichipa pfungwa yekuti inogara iine nzara. Izvi zvinodaro nekuti nepo isu tichichifudza-mubhodhoro, tinochidzivirira zvakanyanya zvekuti hatidi kuti dzife nenzara kweminiti imwe chete, zvine musoro. A) Hongu, Mudiki anokura achiziva kuti anogara aine chikafu chaanacho uye kuti hapana munhu achataura chero chinhu kwaari nezvekudya, saka anotora mukana.
Nekudaro, amai vacho vanorega katsi dzive nenzara zvishoma. Iwe unofanirwa kana iwe uchida kuti vadzidze kutsvaga chikafu chavo vega nekuti iye haazove padivi pako zvachose.
Ari kutambura kushungurudzwa
Kana mumba muine mumwe munhu mupenyu (katsi, imbwa kana munhu) izvo zvisingakusiye uri wega, ndiko kuti, zvinokutandanisa kana kukutarisa nguva dzese, izvo zvinoda kugara zvakakubata mumaoko ako uye, muchidimbu, zvinoita isingaregi iwe utakure hupenyu hwakadzikama hwakafanana nekatsi, inogona kunzwa kuti ine nguva shoma yekudya. Paanozowana kanguva anodya nekukasira nekuti anoziva kuti munguva pfupi inotevera achazodheererwa zvakare.
Katsi dzinotyisa vanowanzo dya chikafu chavo nekukurumidza kupfuura vamwe vese, kwete nekuti ivo vari kurarama hupenyu hwakaipa asi nekuda kwekuti ivo vakadaro. Iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu uye edza kutsvaga mhinduro yekudzivisa kudzipwa.
Mboro yako inogona kunge yave kuda chikafu nekuti kusadyiswa zvakakwana, nekuti ane nzara uye paunomudyisa anenge anotora mweya wake kuti apedze zvese.
Zvinogona kunge nekuti ane nzara kwazvo kana nekuti kana uine katsi dzakawanda, dzimwe nguva iye akasara aine nzara apo dzimwe katsi dzadya kubva kumufudzi wake. Saka Izvo zvakakosha kuti kana iwe uine katsi dzinopfuura imwe pamba, imwe neimwe iine yayo yekudyisa uye yekumwa.
Zvichida gare gare, munhu wese anodya panodyira vamwe vese, asi pachava nezvakakwana kuti munhu wese adye mugove wake wakanaka uye asave nenzara.
Kazhinji, katsi dzinogona kudya pane kudiwa pasina matambudziko nekuti dzinozvipa chikafu chadzo uye dzinomira kana dzaguta. Asi kana iwe uine katsi yakanyanyisa kudya, saka uchafanirwa kuenzanisa muyero wechikafu.
Kana izvi zvikaitika kwauri, iwe unofanirwa kuziva kuti katsi dzinogona kudya kamwe kana kaviri pazuva uye zvichakwanira kwavari kana huwandu hwacho hwaringana.
Chikafu chemhando yepamusoro
Iwe unogona kufunga kuti iyo ini yandinofunga kuti urikupa katsi dzako ndeyemhando yakanaka, asi muchokwadi inoshaya zvinovaka muviri uye zvakakosha mavitamini kuti ivo vave noutano hwakanaka kana kuti vangonzwa vanogutsikana nekudya.
Kana izvi zviri izvo, kana iyo ini ndichifunga kuti uri kupa katsi yako iri yemhando yepasi, zvakajairika kuti itsvage kana kukumbira chimwe chikafu. Hausi kuidyisa zvakanaka uye inoda mishonga! Taura nachiremba wako kuti akupe mazano pane chikafu chinonyanya kumuita kuti anzwe kugutsikana uye panguva imwecheteyo, chengetedza hutano hwako zvese mukati nekunze.
Katsi dzinoda mapuroteni uye chikafu chine mhando yakanaka. Izvo hazvina basa kana uri mudiki kana mukuru, chikafu chinofanirwa kunge chakaringana nezvenyama yako yepanyama, yepfungwa neyemweya.
Kushungurudzika uye matambudziko emanzwiro
Izvo zvinogona zvakare kuitika kuti katsi yako inoda kudya nekuti inofinhwa, kana kuti ine dambudziko repfungwa rinozivikanwa se "psychogenic isina kujairika tsika yekudya". Izvi zvinoreva kuti mboro yako yakapindwa nechikafu, nemhedzisiro yese inogona kuve nehutano hwako.
Kana izvi zvikaitika kwauri uchafanirwa kumudzidzisa kugadzirisa hunhu hwakeKana zvichidikanwa, uchafanirwa kutaura neane feline maitiro nyanzvi kuti utungamise maitiro aya. Asi izvi zvinongoitika chete kana iwe uine zviratidzo zvakaita se:
Mushure mekudya anoda kudya chikafu chemamwe mhuka uye kunyangwe chako
Svetuka patafura kuti udye zviri pairi
Anoratidzika kunge apererwa kana iwe uchiisa chikafu mu feeder yake
Inotsvaga kutariswa nguva dzose kubva kuvaridzi vayo
Anodya zvinhu kana kuzvitsenga kunyangwe zvisiri chikafu
Zviratidzo izvi zvakakosha zvikuru kuti utarise nekuti nenzira iyi unozogona kuziva kana zviri chaizvo zviri kuitika kwauri kuti uzvigadzirise nekukurumidza.
Kunyangwe izvo zvatakaona kusvika parizvino zviri zvikonzero zvikuru nei kati inogona kudya nekuzvidya mwoyo, kune zvimwe zvatisingafanirwe kutonga kunze:
Anoda chikafu chakeAnonakidzwa nazvo zvekuti haagone kubatsira asi kuimedza nekukurumidza sezvaanoita.
Ari kurwara: kune zvimwe zvirwere, zvakadai sehypothyroidism, kutambura nekusaenzana kwetachiona kana kuva nechirwere cheshuga izvo pakati pezviratidzo zvavo kuwedzera mukuda kudya. Asi haufanire kutya kuti dzakawanda zvezvirwere izvi zvinorapika.
Chii chekuita kukubatsira iwe?
Kana chikonzero chawanikwa, ndiyo nguva yekuita. Chimwe chezvinhu chinowanzo shanda zvakanyanya ndeche kutenga yakakosha feeder yemhuka dzinonetseka, sezvizvi:
Saka zvishoma uchafanirwa kushanda zvishoma kuti uwane chikafu chako, izvo zvinokumanikidza kuti udye zvishoma nezvishoma. Asi pamusoro pezvo, zvakakosha kuti nzvimbo yakachengeteka uye yakanyarara ipiwe kwaanogona kuzvidyisa asina kana kunetseka nezve chero chinhu, senge yako yekurara semuenzaniso.
Zvakare chengetedza mupfungwa kuti kana iwe uchishungurudzwa isu tinofanirwa kumisikidza mimwe miganho kuitira kuti munhu wese pamba agare pamwe chete achifara. Tinofanira kuremekedza imwe neimwe yenhengo, zvikasadaro matambudziko anomuka. Kana iwe uine kusahadzika nezvekuti unganzwisisa sei katsi yako, mu ichi chinyorwa Tinokupai makiyi kuitira kuti hukama hwenyu hubatsire mose.
Kana pasina chimwe cheichi chinobatsira katsi yako, saka taura nachiremba wako kana nyanzvi kana zvinhu zvikasaita nani. Panguva ino, unogona kuchengeta aya matipi mupfungwa:
Teerera pairi uye shandisa nguva yakanaka nekatsi yako
Mupe chikafu chemhando yepamusoro
Mupe chikafu chakanyorova kakati wandei pasvondo kuwedzera kune chikafu chake chakaoma
Muwedzere mamwe mvura yekuti anwe uye asashaya mvura uye anzwe kuzara kwenguva yakareba
Chengetedza zvimwe zvekudya zvezuva nezuva (semuenzaniso kaviri pazuva), kana kuzvipa kakawanda mukati mezuva, asi zvidiki zvidiki
Kana akakukumbira chikafu, usaite hanya naye
Edza kuchinjisa nguva yako yekudya kuti ienderane neyayo kuti udzivise kukakavara kwemuedzo
Usamupe chimwe chikafu nekuti unomunzwira tsitsi
Nemazano aya kati yako ichave iri nani, zvechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvokudya » Nei katsi yangu ichidya neshungu?
Marcelo, Rosario, Argentina akadaro
Ruzivo rwese rwunopihwa pane ino saiti runobatsira: ipfupi, chaiyo uye nemutauro unoshamwaridzika. Ndatenda!
Pindura Marcelo, Rosario, Argentina
Ndatenda nemashoko ako, Marcelo 🙂.
Zvinokonzera feline alopecia